Past Events – Burmese Buddhist Temple
2020-04-12	April 12, 2020	 - 2021-12-07	Now
April 12, 2020 @ 12:00 am - 4:00 pm
April 17, 2020 @ 11:00 am - 10:00 pm
Myanmar New Year Day မြန်မာ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့
During the day, Burmese usually make merits, such as visiting to temples, paying homage to Buddha and Sanga.
Vesak Day Eve Chanting
VESAK DAY Buddhists celebrate Vesak Day to remember the five auspicious occations which occoured on the full moon of May. They are: The first prediction which the Bodhisatta (Buddha-to-be) received about his becomingaBuddha,…
Vesak Day ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့
Vassavasa (Rain Retreat) Offering of Robes ဝါဆို သင်္ကန်း ကပ်လှူ ပွဲ
VASSA VASA The Vassavasa period lasts for about three months, beginning from the day after full moon of July to full moon day of October. During the three months of monsoon rains, bhikkhus go into…
ဝါဆိုလပြည့်နေ့ကား သန္ဓေ၊ တောထွက်၊ ဓမ္မစက်၊ တချက်ပြာဋိဟာ ဆိုသည့်အတိုင်း ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင် ပဋိသန္ဓေ နေတော်မူခြင်း။ တောထွက်တော်မူခြင်း။ တရားဦးဓမ္မစကြာကို ဟောကြားတော်မူခြင်း။ ရေအစုံ မီးအစုံ တန်ခိုးပြာဋိဟာကို ပြသတော်မူခြင်းဟူသော ထူးခြားသည့် ဘာသာရေးမှတ်တိုင်ကြီးများကို စိုက်ထူခဲ့သောနေ့ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဝါဆိုလပြည့်နေ့သည် ဘုရားအဖြစ်ကို ဝန်ခံတော်မူသောနေ့လည်း ဖြစ်သည်။ တရားရတနာ စတင်ပေါ်ပေါက်ရာနေ့လည်း ဖြစ်သည်။ သံဃာရတနာ စတင်ပေါ်ထွန်းသောနေ့လည်း ဖြစ်သည်။ ပုထုဇဉ်ခရီးမှ အရိယာခရီးသို့ စတင်ကူးပြောင်းခွင့် ကြုံသောနေ့လည်း ဖြစ်သည်။ ဧဟိဘိက္ခူ…
Transferring of merits to the Departed ones (Chinese 7th month Festival)
TRANSFERRING OF MERITS TO HUNGRY GHOSTS (PETAS) Chinese Seventh Lunar Month The practice of transferring merits to departed ones originated from the time of the Buddha. The first person to hold suchaceremony was…
THADINGYUT FULL MOON DAY / ABHIDHAMMA DAY / PAVARANA DAY Thadingyut Full Moon Day or Thadingyut Festival isafestival of lights and the second most popular festival in Myanmar after Water Festival (Thingyan). Burmeses…